हिजै राजिनामा दिएका भिम रावलले माफी माग्दै यसो भनेपछि…. – Dailny NpNews
हिजै राजिनामा दिएका भिम रावलले माफी माग्दै यसो भनेपछि….
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १६:२३:२९
काठमाडौ । ५ वर्षको कार्यकाकालका लागि मत दिएका आफ्ना मतदातासंग एमाले नेता भिम रावलले माफी मागेका छन् । आइतवार सांसद पदवाट राजिनामा दिएका नेता रावलले आफ्ना अछामी मतदातासंग माफी मागेका हुन् । उनले नेतृत्व तह ब्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको र त्यसको मतियार आफु नहुने भन्दै सांसद पदवाट राजिनामा दिएका थिए ।
‘उनले भनेका छन् जनता,विशेषतः अछामी मतदाताका सामु स्वच्छ र नैतिक राजनीतिक जीवन तथा देशको सर्वोपरि हितमा समर्पित रहने बाचा अनुसार मैले अनैतिक र दूषित राजनीतिको मतियार नहुन प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएको छु’, रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अछामी जनताले ५ वर्षका लागि दिएको मत पूरा अवधि संरक्षण गर्न नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु।’